Isticmaalka Sawirada iyo Video-ga Blog-gaaga WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Isticmaalka Sawirada iyo Fiidiyowga ee Blog-gaaga WordPress
Isticmaalka Sawirada iyo Fiidiyowga ee Blog-gaaga WordPress
Xaqiiqo caalami ah: qoraalada blogka iyo boggaga internetka ee leh sawirro wanaagsan iyo fiidiyowyo guud ahaan waxay kor ugu kici doonaan bogga natiijooyinka raadinta raadinta marka loo eego kuwa aan lahayn.
Muuqaaladu waa wax aad u fiican in lagugu daro website WordPress website. Laakin helida muuqaalo ama muuqaalo wanaagsan oo aan lahayn arimaha lahaanshaha daabacaada waxay noqon kartaa caqabad. Hubaal inaad ka bixin karto sawirada goobaha sida iStockPhoto iyo ShutterStock, laakiin ka waran haddii aad leedahay caqabado miisaaniyadeed? Oo yaa waqti u haysta inuu sawiro iyaga u gaar ah?
Nasiib wanaag, waxaa jira shabakado waaweyn oo bixiya sawirro bilaash ah, muuqaal cajiib leh oo leh xaddidaadyo yar.
Pixabay - In ka badan hal milyan oo sawiro, sawiro, sawiro farshaxan, iyo muuqaalo bilaash ah.
Pexels - Sawirro iyo fiidiyowyo badan oo bilaash u ah isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo ganacsiga labadaba.
Unsplash - Kaydka sawirada bilaashka ah ee ay hibada u siiyeen sawir qaadayaasha deeqsinimada leh.
Gratisography - Sawirro bilaash ah ayaa lagu daraa toddobaadle si shakhsi ahaan iyo ganacsi ahaanba loo isticmaalo.
Relacionado: 10 Cashar oo Nakhshad Shabkad ah oo aad ka baran karto StarWars.com
The xawaaraha mareegahaaga waa mid aad muhiim u ah, laakiin qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha mareegaha cusub ayaa sameeya qalad muhiim ah oo ku dhamaanaya inay hoos u dhigaan waqtigooda culeyska: ma hagaajinayaan sawiradooda.
Ka fakar -- .jpgs-yada maanta way ka weyn yihiin sidii hore. Xataa sawirada lagu qaaday teleefankaaga gacanta waxay noqon karaan kuwo aad u weyn.
Adigoo wanaajinaya sawiradaada, waxaad haysan kartaa xogta uu isticmaaluhu u baahan yahay si uu u soo dejiyo si uu u eego balooggaga iyo sawirkaaga sida ugu yar ee suurtogalka ah oo aanu lumin tayada. Tani waxay xitaa aad uga muhiimsan tahay qalab mobile, kuwaas oo inta badan xogta ku soo dejinaya shabakad gaabis ah.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa cabbirka sawiradaada. Sawirrada xallinta sare waxay qaadanayaan waqti aad u dheer in la soo dejiyo looma baahna in lagu soo bandhigo bandhigga moobaylka ama kormeeraha. Caadi ahaan waxaad yareyn kartaa xallinta sawirka adigoon saameyn ku yeelan tayada bandhigga. Oo uma baahnid Adobe Photoshop si aad u sameyso. Waxa jira dhawr qalab oo khadka tooska ah oo aad tan u samayn kara, sida Resizer Web iyo Optimizilla.
Sawirkaas xagga sare ee boostadan? Taasi waxay ka timid Pexel waxaana hoos u dhacay 97% iyadoo ay aad hoos ugu dhacday tayada bandhigga. Boom
Plugins in la tixgeliyo
Marka sawiradaada la cabbiro, waxaa jira dhowr plugins oo aad u baahan karto inaad tixgeliso isticmaalka:
Sawirada la qabsiga ee WordPress - Waxay wax ka beddelaysaa oo ay wanaajisaa sawirrada la geeyo aaladaha mobilada si hufan oo aan qarsoonayn si ay si weyn u yarayso waqtiyada rarka.
Culays caajis ah - Kaliya waxa ay ku shubtaa sawirka bogga marka uu u muuqdo isticmaaluhu halkii uu ku shubi lahaa dhammaan sawirada si uu bogg u muujiyo.
Waxaa jira tiro yar oo plugins kale ah waad isticmaali kartaa. Samaynta sawirada kuwo u jawaabaya aaladaha mobilada iyo sawirada caajiska ah ayaa ah labada dariiqo ee ugu fiican ee lagu wanaajin karo gudbinta sawirka. Markaad raadinayso plugin wanaagsan, hubi afar shay:
Sidee caan u tahay plugin ku salaysan tirada soo dejinta marka loo eego beddelka?
Waa maxay qiimeynteeda marka loo eego plugins kale?
Intee in le'eg ayaa la cusbooneysiiyay?
Ma la jaan qaadaya sii dayntii ugu dambeysay ee WordPress?
Relacionado: Hagaha Bilowga ee WordPress Plugins
Ilaa uu fiidyahaagu yahay warbaahintaada sifaysan, waa fikrad wanaagsan inaad geliyaan fiidyahaaga YouTube ama Vimeo kadibna aad geliso muuqaalka boostadaada.
Ku-xidhka fiidyaha YouTube waa sahlan tahay.
Soo rar muuqaalka YouTube.
Nuqul ka samee isku xirka.
Dhaaf xiriiriyaha gundhigga ee boostadaada.
Haddii aad rabto in aad wax ka bedesho cabbirka muuqaalka, ku dar tillaabooyinka soo socda:
Ku beddel xidhiidhka guntan qaabka hoose
Ku beddel "w" ballaca dhabta ah, "y" dhererka dhabta ah iyo youtube_url URL dhabta ah.
Tusaale ahaan, laga bilaabo xiriirkan guntan:
(Marka laga reebo isticmaal "[ ]" halkii "<>")
Sawirro iyo Fiidyow la cusbooneysiiyay? Hubi!
Hadda kor u qaad martigelinta shabakada hillaaca-dhakhso leh. Waxaan hubin doonnaa in goobtaadu tahay mid degdeg ah, ammaan ah, oo had iyo jeer kor u kac ah si booqdayaashaadu kuugu kalsoonaadaan.
Talaabooyinka 4-ta ah ee lagu abuurayo Mareeg WordPress ah oo Cajiib ah
Isticmaalka Aynu ku Sirinno DreamPress